Daawo: Xasan sheekh oo sharaxay Waxqabadkiisa iyo wuxuu ka yeeli doono maamulka Somaliland! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Daawo: Xasan sheekh oo sharaxay Waxqabadkiisa iyo wuxuu ka yeeli doono maamulka Somaliland!
Daawo: Xasan sheekh oo sharaxay Waxqabadkiisa iyo wuxuu ka yeeli doono maamulka Somaliland!
Dec 29, 2016MAQAALO, MUUQAAL
Madaxwaynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Musharax u taagan Xilka madaxwaynaha Soomaaliya, ayaa wuxuu ka hadlay Waxyaabaha ay Qabatay Xukumadiisu Waqtigii uu madaxwaynaha ahaa, wuxuuna xusay waxa uu ka qabtay Lix Tiir oo uu balan Qaaday 2012-kii.
Ugu danbayntii Xasan sheekh Maxamuud ayaa Waxqabadka Dawladiisa wuxuu ku daray Arimaha Midnimada Soomaaliya, Wuxuuna Sheegay in Maamulka Somaliland ay ku Qancin doonaan Midnimada dalka, iyadoona uu sheegay inay Horey u dhaceen dhibaatooyin, Balse laga daawayn doono.
Previous PostTaliska AMISOM oo ka hadlay sawirro beryahan si weyn u qabsaday baraha bulshada Soomaalida! Next PostDowlada Siiriya iyo Mucaaradka hubeysan oo Heshiis xabad joojin ah Caawa ay dhaqan galinayaan!!